ननिम्तियोस् प्रत्यक्ष दलीय टकराव | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
ननिम्तियोस् प्रत्यक्ष दलीय टकराव
२०७१ पुष १०, बिहीबार ०२:२८ गते
राजनीतिक दलहरुले ठीक समयमा बुद्धि पु¥याएनन् । पहिलो संविधानसभा नेपालका राजनीतिक दलहरुको निकम्मापन केही र बाँकी सबै विदेशी कारणले असफल भएको थियो । दुनियाँलाई दोष दिनुको सट्टा आफैँ दोष ग्रहण गर्न उपयुक्त हुने ठानिएकाले मात्रै एक दलले अर्को दललाई दोषारोपण गरेको थियो । खास कारण विदेशी थिए, पहिलो संविधानसभा बिनानयाँ संविधान विघटन हुनुमा । बितेको कुरा
सकियो । परनिर्भरतालाई स्वीकारेपछि परिणाम यस्तो हुने नै भयो । संसारका धनी देशहरुका अगाडि लम्पसार परेर विकास खर्च माग्ने, त्यतिले नपुगेर साधारण खर्च धान्न बजेटमै दुनियाँको आशा गरेर उधारो बजेट बनाउने गर्न लागेपछि नेपाली राजनीतिमा दुनियाँले हस्तक्षेप सीधा वा घुमाएर गर्ने नै भए । यतिबेला हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा कसैले हस्तक्षेप नगर भनेर हल्ला गर्नुको कुनै तुक छैन । जबसम्म हरेक कोणबाट मुलुक आत्मनिर्भर हुँदैन, जबसम्म दुनियाँसँग भीख मागेर देश चलाइन्छ, तबसम्म हस्तक्षेप नगर भन्ने नेपालीको सरकार र सरकार हाँक्ने दलहरुलाई नैतिक रुपले अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन ।
पहिलो संविधानसभा फोकटमा विघटन भयो । नेपाली जनता दिनभरि टन्टलापुर घाममा सेकिएर राजनीतिक दलहरुलाई संसद् भवन पु¥याए । सांसद्हरुलाई मासिक भत्ता खुवाए । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए । माधवकुमार नेपाललगायत अरुलाई पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उकाले । सिंहदरबारमा पुराना प्रधानमन्त्रीहरुको लाइनमा एक–एक थान फोटो पनि झुन्ड्याउन पाउने स्थिति जनताले खडा गरिदिए । नेपाली जनताले आफ्नो काम र कर्तव्य निकै कुशलतापूर्वक निर्वाह गरे, तर अनेक–अनेक कारणले पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । अरबौँ धन नासियो । चार वर्षको समय खेर गयो । मान्छेको जिन्दगीमा चार मिनेटको समय प्रयोग गर्न जान्नेका लागि अमूल्य हुन्छ, तर नेपाली जिन्दगीमा प्रयोग गर्न नजान्दा चार वर्षको अवधि फोकटमा खेर गयो । सायद्, नेपालको इतिहासमा कुनै पुण्यकर्म गर्नका लागि छुट्याइएको समयमध्ये यति लामो समय खेर गएको पहिलोपटक नै हुनुपर्छ । पहिलो चार वर्षको समय खेर फालियो । नफाल्न पर्ने समय सुझबुझका कमी, लोभी चरित्र, अहंकार आदिका कारण फालियो । लामो समयसम्मका लागि आँसु खसालेर उपलब्धि नहुने भएपछि आँसु झार्नुको कुनै अर्थ रहेन । नेपाली जनताले छातीमाथि ढुंगा राखेर पहिलो संविधानसभा विघटनलाई हाँसीहाँसी खपे, थामे र चित्त बुझाए ।
ङिच्च दाँत देखाउँदै राजनीतिक दलका नेताहरु दोस्रोपटक पनि भोट दिनोस्, कसम खाएर भन्छौँ एक वर्षभित्र अर्थात् २०७१ सालको माघ ८ गतेभित्र नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्छौं भन्दै जनताका घरघरमा आए । कुनै विकल्प नभएका जनताले गाली गर्दै र धारे हात लाउँदै पुनः राजनीतिक दललाई पुरानै संविधानसभा भवनभित्र छिराए । पहिलेकै पाराले दुःख–कष्ट खेपेर फेरि प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर, रामचन्द्र, उपेन्द्र, राजेन्द्रहरुलाई त्यहाँ पु¥याए । राजावादी कमल थापाको एउटा समूहबाहेक प्रायः सबै पुराना अनुहारलाई नेपाली जनताले दोहो¥याएर उही थलोमा पु¥याए । फेरि तलब–भत्ता, गाडी, कोट–पाइन्ट, टाउकादेखि खुट्टासम्मका सबै सुविधा लाउन–खान पाउने ठाउँमा जनताले तिनलाई पु¥याए । आशा यत्तिमात्रै थियो जनताको कि यिनले अन्तरिम संविधानलाई विस्थापित गर्नेछन् र नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्नेछन् । तर, घोर दुर्भाग्य ! नेपाली जनताको नयाँ संविधान पाउने आशामाथि राजनीतिक दलहरुले पुस–माघको जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएको शरीरमा चिसो पानी खन्याएजस्तै पाराले पानी खन्याउने तर्खर गर्न लागे ।
अघिल्लो संविधानसभाले सुस्त मनःस्थितिका रोगीहरुद्वारा समेत सजिलै समाधान गर्न सकिने समस्याहरु समाधान गरेर तत्कालीन नेता र सांसद्् बिदा भएका थिए । संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र प्रदेश संख्या निर्धारणजस्ता जटिल विषयहरुमा सहमति जुटाउन नसकेर असफल भई फर्किएर दलका नेताहरु यसपटक पनि यिनै मुद्दाहरुमाथि छलफल गर्ने तर टुंगो नलगाउने, लगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेका छन् । पहिलो कुरा त नेपाली जनताले यिनलाई दोस्रोपटक भोट दिएर पठाउँदा एक वर्षभित्रमा संविधान बनाऊ भनेका थिएनन् । संविधानसभाको पूरा अवधिभित्र बनाऊ भन्ने जनताको आदेश थियो, तर यिनले पूरा अवधि छँदाछँदै हतारिएर हामी कुनै पनि हालतमा एक वर्षभित्र नयाँ संविधान जारी गर्छौं भने र माघ ८ गतेलाई अन्तिम दिन तोके । यसरी एक वर्षको अवधि तोक्न जरूरी थिएन, तोके । यो गल्ती छोप्नका लागि राजनीतिक दलहरुले पुनः जनताका नाममा अर्को नयाँ अपिल जारी गर्न सक्थे र भन्न सक्थे कि एक वर्षभित्र संविधान निर्माणजस्तो जटिल विषय सल्ट्याउन सकिएन, पूरा अवधिभित्र बनाइसक्छौँ । पहिलोपटक क्षमा दिएका नेपाली जनता राजनीतिक दलहरुलाई क्षमा दिन तुरून्तै राजी हुन्थे । तर विडम्बना ! दलहरुले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न सकेनौँ त भनेनन् नै, संविधान अब जारी हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अन्यौलता सिर्जना गर्दै एक दलले अर्को दललाई हिलो छ्याप्ने र लाञ्छना लगाउने गर्न थालेका छन् ।
एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र मधेसवादी दलहरु संविधानसभा भवनबाहिर आएर सडक संघर्षको तयारी गर्न लागे । नेकपा–माओवादी पहिले नै संविधनसभाबाहिर थियो । उसले यो संविधानसभालाई स्वीकारेकै छैन भने त्यही पार्टी फेरि नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा नयाँ जन्मिएर फुटेको छ । एकातिर संविधानसभाभित्र भएका दलहरुबीच संविधानका खासखास अन्तरवस्तुमा सहमति जुटेन, जुटाएर संविधान जारी गरे पनि यो संविधान काम लाग्दैन भन्ने तर्कसाथ जलाउनका लागि मट्टीतेलको जर्किन र सलाई लिएर केही राजनीतिक शक्ति तयारीको अवस्थामा छन् । अब यस्तो अवस्थामा नयाँ संविधान जारी होला भन्ने आशा गर्न सकिँदैन ।
कथंकदाचित् नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित अन्य केही दलको सहयोगमा दुई तिहाई पु¥याएर संविधान जारी गरिए पनि संविधानसभा भवनबाट बाहिर हुत्तिएका एमाओवादी र मधेसवादी दलहरुले असहमतिमा आन्दोलन गर्नेछन् भने त्यो आन्दोलनमा पेट्रोल खन्याउन संविधानसभालाई पहिल्यै बहिष्कार गरेका वैद्यबावाला ड्यास माओवादी र अहिले भर्खरै निकै उत्साहका साथ वैद्यबालाई बाईबाई गरेका नेत्रविक्रमहरु सडकमा ओइरिने छन् । जसले जति फूर्ति लाए पनि प्रचण्डवाला माओवादी, वैद्य माओवादी, मधेसवादी दलमध्ये केही दल र नेत्रविक्रम चन्दवाला माओवादीहरु सडकमा ओर्लिए भने दुई तिहाईवाला सरकारले संयुक्त रुपमा देखिने यो आन्दोलनको ज्वारभाटा थेग्न सक्नेछैन । दलका कार्यकर्ताहरुले आफ्नो चरित्रअनुसार बन्द र तोडफोड पक्का गर्नेछन् । सरकारको आफ्नो विशेषताअनुरुप दमनमा उत्रिन पर्ने छ । त्यो दमनमा केही नेपाली नागरिकको मृत्यु हुन सक्छ । मृत्युको चोटले धेरै नागरिकलाई सडकमा सरकारविरूद्ध ओराल्ने छ । हेर्दाहेर्दै मुलुकमा ठूलै रक्तपात निम्तिन सक्छ ।
भोलिको भविष्य देख्ने तागत मान्छेमा हुन्छ, अन्य जीवहरुमा छैन । यतिबेला यदि जिम्मेवार नेतृत्व गणले आफूलाई मानव सदस्य हुँ भन्ने दाबी गर्ने हो भने तेस्रो आँखा खोलेर अहिल्यै हेरुन् । हेर्दा प्रस्ट नेपाली–नेपाली जुधिरहेको दृश्य देखिन्छ । त्यो बेला आउनुअगाडि नै एउटा प्रश्न तेर्सिन्छ– “के यही दिन देख्नका लागि २४० वर्षे राजतन्त्र फ्याँक्नु परेको हो ? नेपाली जनताको मुक्ति आन्दोलनका नाममा सञ्चालित दीर्घकालीन जनयुद्धका नाममा १७ हजारभन्दा बढी नेपाली ज्यान फाल्नु परेको हो ? जनताको तर्फबाट अपवादलाई छाडेर प्रत्येक राजनीतिक दलको नेतृत्व पंक्तिका अगाडि यस्ता प्रश्नहरु निरन्तर तेर्सिने छन् । त्यतिबेला दलका नेताहरुले जवाफ दिन सक्ने अवस्था आउनेछैन । एक दिन होइन, दुई दिन होइन– सधैँभरि यही पाराले चल्ने प्रयास दलहरुले गरे भने जनताको धैर्यको बाँध अवश्य फुट्ने छ । बाँध फुटेको अवस्थामा जनताले नयाँ निर्णय पनि गर्न सक्छ । आत्तिएर, निसास्सिएर, जनताले हतारमा गर्ने निर्णय गलत हुन पनि सक्छ । त्यो गलत निर्णयको जिम्मेवारी दलहरुले नै लिनुपर्ने छ ।
त्यस कारण, अभैm मौका छ । समय पूरै घर्किसकेको छैन । ड्यास माओवादी, नेत्रविक्रम चन्दवालासँग दुई दिनपछि वार्ता गरे पनि अब हुन्छ, तर प्रचण्ड माओवादी र मधेसवादीहरु संविधानसभाबाट बाहिर नभाग । कांग्रेस–एमालेहरु बहुमत र दुई तिहाईको घमण्ड त्याग । खुरूक्क प्रचण्ड र मधेसवादी दलहरुसँग अँगालो मार । नयाँ संविधान बनाउने तर्खर गर । ड्यास माओवादी र नेत्रविक्रमहरुलाई दमन गर्नेतिर नलाग । मनाऊ, फकाऊ, राजनीतिक स्नेह प्रदर्शन गर । समस्या समाधान टाढा छैन । सल्लाह नमान्ने र मेरै कुरा ठीक भन्छौ भने सरकारपक्षीय दल र पहिल्यै बाहिर बसेका अनि अब संविधानसभाबाट बाहिरिने तर्खर गर्नेहरुबीच गतिलै टक्कर हुने छ । त्यो टक्कर र द्वन्द्व ननिम्तियोस् । जिन्दगीको अर्थ नै पैसा र पद हो, अरु होइन भन्नेहरुलाई समयमै बुद्धि फिरोस् । प्रचण्ड, सुशील, केपी र संविधान बनाउने वा नबनाउने हैसियत राख्नेहरुकै जय होस् !